Ukubhema xa ukhulelwe kunemiphumo emibi
Ukutshatyalaliswa ngenxa yokubhema ngexesha lokukhulelwa
Umngcipheko wesifo somhlaza hhayi nje ngumama otshaya
Ukuyeka ngokupheleleyo ukutshaya xa ukhulelwa
Ngokwe-statistic, malunga ne-30 ekhulwini lababhemayo basasebenzisa ugwayi wabo ekuqaleni kokukhulelwa. Kule, isiqingatha sazo sikwazi ukugcina izandla zabo eziqingqiweyo ezinyangeni zokuqala zokukhulelwa. Ukutshaya ngexesha lokukhulelwa kunempembelelo enkulu.
Ukubhema ekukhulelwe - kukho imiphumo emangalisayo
Kulo lonke, malunga neepesenti ze-15, nangona kunjalo, umlutha we-nicotine unquma kakhulu ubomi bemihla ngemihla ukuba baya kulimaza umntwana ngokuzithandela.
Ukubhema ekukhuleleni kuyisifo!
Umxholo wokuqala we-diaper ubonisa umthwalo womsi womama ngexesha lokukhulelwa
Njengoko i-meconium - okanye i-colloquially njenge-Kindspech - ikhupha isitulo sokuqala emva kokuzalwa, ekhutshwe yintsana. Ezi fom sele zenziwe kwinyanga yesine yokukhulelwa. Iqule bile edibeneyo, iiseli zeembumba ze-mucous kwaye zitshise i-amniotic fluid, enokuthi iqulethe imifanekiso yelinqe kunye neenwele.
Uphando luye lwabonisa ukuba luyakwazi ukufumana ukungcola kunye neemetabolites zeziyobisi ezidliwe ngexesha lokugqibela kweenyanga ze-6 zokukhulelwa. Nangona kunjalo, uhlalutyo olunzulu lwexabiso lomsi owenziwe ngumama ngexesha lokukhulelwa akunakwenzeka.
Njengoko kulindeleke, oogqirha kunye neengcali zicebisa ngokutsha ukutshaya ngexesha lokukhulelwa. Ngokukodwa, ukukhula komntwana kuphelelwe yingozi kwaye ingozi yokukhawuleza okanye, kwimeko embi kakhulu, ukukhulelwa kwesisu kuye kwandiswa ngendlela ezinzileyo. Ngaphezulu, umngcipheko weempazamo ezinjengezitho ezikhubazekileyo okanye izitho zandiswe.
Ukongezelela, kuboniswe ukuba abantwana abazalwa ngokubhema abafazi abakhulelweyo bangama-gram e-200 elula ngaphezu kokukhulelwa okuqhelekileyo. Oku kungenxa yokuba, ngenxa yokubhema, imithwalo yegazi yomama iyincinci.
Ngaloo unikezelo yenziwa verschlechter ekhoyo kunye umntwana ufumana izondlo ngaphantsi kunye mpilo intambo yosana, nto leyo ibe ohlala nefuthe elibi ekukhuleni kunye nophuhliso. Ukongeza, umngcipheko elandelayo udidi usuleleko okanye usana ukufa syndrome yi kabini.
Izifundo zibonise ukuba ukutshaya abafazi abakhulelweyo baya kumaxesha angama-13 ngemini yokukhwaza. I-Extrapolated kwithuba lokukhulelwa okuqhelekileyo kweenyanga ezilisithoba, oku kubangela malunga nokubhema kwe-3600. Ukuba nangona iikhemikhali ze-4000 ziquke umsi wecuba, ezo ziyingxenye ye-carcinogen kwaye enetyhefu kakhulu, ziqwalaselwa, ingaba yinto embi.
Inyaniso yokuba ababhemayo bathatha umngcipheko okwandisa kakhulu unomdla we-kansa eyaziwayo. Kodwa nangona umntwana etshaya ngexesha lokukhulelwa, isiseko sesifo esilandelayo senziwa ngumhlaza. Kule nkalo, uphando olwenziwa yi-German Cancer Research Centre lubonise ukuba abantwana oomama abasebenzisa i-cigarettes ngexesha lokukhulelwa bafumana amaxesha e-1,5 amathuba okuba ne-bladder kunye ne-upper respiratory cancers. Umdlavuza wamaphaphu uthe malunga ne-1,7-phinda yanda kwaye isifo somhlaza singasemva kabini.
Ngoko, isiphelo sinokuthi kuphela ukuba abafazi abakhulelweyo mabayeke ukutshaya. Oku akuyona nje into enelungelo lomntwana ongakazalwa. Umama uya kukwazi ukubona iziphumo ezilungileyo zokuyeka ukutshaya emva kweeyure ezimbalwa. Ngaloo ndlela, emva kwemizuzu ye-20, ukunyuka kwegazi kunye nentlawulo yenhliziyo ibonakala. Kwiiyure ezisibhozo, izinga le-carbon monoxide egazini liye lahla ngokukhawuleza. Oku kuya kuqaphela kwakhona umntwana ngokukhawuleza, kuba ngoku ufumana inani elaneleyo le-oxygen kunye nezondlo.
Xa utshaya ukutshaya, ke ke, abahlala nabo okanye abahlobo kunye nabasetyhini ababelekileyo akufanele bazive bengenakuphikiswa. Kwakhona, ukutshaya umsi womama kungasongela umntwana kwisibeleko. Ngoko ke, indlu apho abafazi abakhulelweyo bahlala khona bashiye umsi. Kakade, ukutshaya kufuneka kugwenywe ngokupheleleyo nangemva kokukhulelwa.
Yeka ukutshaya zempilo
Yeka ukutshaya - hlala ungabhema
Yeka ukutshaya ngokusebenzisa i-hypnosis
Yeka ukutshaya ngaphandle kweempawu zokuyeka
Utywala xa ukhulelwa
Ukubala umama wephepha nomntwana